मलाई किन फेसबुक मनपर्दैन Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 31, 2009 आइतवार, नोभेम्बर 3, 2013 Douglas Karr
तपाईंहरू जसले मलाई बोलेको देख्नुभएको छ उनीहरूले प्रायः मलाई फेसबुकको बिरूद्ध बोलेको सुन्नुभएको छ। म फेसबुकमा छु, म फेसबुकमा भाग लिन्छु ... तर मलाई यो मनपर्दैन। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन म फेसबुकमा रमाउँदिन:
नेभिगेसनले मलाई कुनै अर्थ राख्दैन। त्यहाँ मेनूहरू, साइड मेनूहरू, नेभिगेसन देखा पर्छन् ... म हराउँदछु र विश्वास गर्दैनन् यो कुनै सहज छ।
म ठट्टा गर्छु कि फेसबुक मात्र एओएल १०.० छ। यो बन्द प्रणाली हो ... यो चाहन्छ आफ्नै सबै कुरा र तपाइँ छोड्न चाहनुहुन्न। सबै नेटमा उत्तम साइटहरू छन्, मलाई त्यहाँ सबै गर्न आशा गर्न छोड्नुहोस्!
निजीकरण को लागी कुनै विकल्प छैन। म फेसबुक निलो (# 3B5998) बाट थकित छु। मलाई मेरो पृष्ठमा एक शैली पाना राख्नुहोस् र यसलाई अनुकूलित गर्नुहोस्!
प्रायोजित लिंकहरू "एकल" को अन्तहीन आपूर्ति हो ... एकल आमाहरू, एकल क्रिश्चियन, एकल ... मलाई एक्लै छोड्नुहोस्! मैले X सय पटक क्लिक गरेको छु, पोइन्ट प्राप्त गर्नुहोस्!
फेसबुक असफल हुनेछ (हो, मैले यो भने!) जबसम्म यसले एक सार्वभौमिक कमजोरी सुधार गर्न सक्दैन, यद्यपि। मेरो फेसबुकमा अधिकांश समय व्यतीत हुन्छ फेसबुक प्रबन्ध गर्दै... यसलाई प्रयोग गरिरहेको छैन। मैले अनुप्रयोगहरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ, आमन्त्रणहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्, घटनाहरू बेवास्ता गर्नुहोस्, मित्र अनुरोधहरूलाई वेवास्ता गर्नुहोस्, कारणहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्, फ्यान बन्न बेवास्ता गर्नुहोस्, र विज्ञापनहरू बेवास्ता गर्नुहोस्। यो रमाईलो छैन ... यो कष्टकर छ।
फेसबुक भित्रका भाइरल अनुप्रयोग फ्रेमवर्क यसको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो। किनकि मसँग साथीहरू, परिवार र सहयोगीहरूको ठूलो नेटवर्क छ, त्यसैले म लगइन गर्दछु र निमन्त्रणाको अन्त्य सूचीमा छ। यो हास्यास्पद हो र कहिले पनि बन्द हुँदैन। मलाई थाहा छ त्यहाँ केहि सेटिंग्स छन् जुन मैले यसलाई मद्दत गर्न सक्छु तर… तर मँ उनीहरु कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन सकिन। म सुरू गर्न सबै अनुप्रयोग अनुरोधहरू ब्लक गर्न चाहान्छु।
यो केवल मेरो विचार हो, अवश्य! म तपाइँको सुन्न चाहन्छु ...
सेप्टेम्बर 1, 2009 मा 3: 02 AM
[seesmic euL7qKPBTh|http://t.seesmic.tv/thumbnail/dDWf2uxDSk_th1.jpg http://www.seesmic.com/video/euL7qKPBTh दृश्यात्मक]
सेप्टेम्बर 1, 2009 मा 3: 58 AM
वाह, किन म फेसबुकमा छैन भन्ने मेरो सूचीमा थप्नु भएकोमा धन्यवाद, lol!
मैले चिनेका व्यक्तिहरूबाट निमन्त्रणाहरू पाउँछु, मैले चिनेका मानिसहरू र मलाई थाहा छैन कि तिनीहरू को हुन् र तिनीहरूसँग मेरो व्यक्तिगत इमेल ठेगाना किन छ! प्रत्येक चोटि जब म प्रलोभनमा पर्छु (अर्थात, प्रयास गर्नको लागि सताइन्छ), म TOUS मार्फत आंशिक रूपमा पाउँछु (के अरू कसैले तिनीहरूलाई पढ्दैन?) र ठट्टा - "किन कोही यी सर्तहरूमा सहमत छन्!?!"
सेप्टेम्बर 1, 2009 मा 7: 56 AM
मलाई थाहा थियो यदि मैले लामो समयसम्म पर्खें कि मैले FB को बारेमा गरेको जस्तै महसुस गर्ने अरू कसैलाई भेट्टाउनेछु। यो केवल अचम्मको कुरा हो कि तिनीहरूले यस्तो प्रचुर वृद्धिको आनन्द लिन जारी राख्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू हुनेछन् जसले पीडामा FB प्रयोग गर्छन् किनभने यो web2.0 सम्पत्तीमा मानक आइकन हो। म पनि यसलाई आमूल परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छु वा अन्ततः इन्टरनेट एक्सप्लोररको समान मृत्यु भोग्न चाहन्छु। जब म FB मा छु म निरन्तर आफैलाई प्रश्न सोधिरहन्छु "म FB बिना कसरी गर्न सक्छु र कसरी प्रभावकारी हुन सक्छु?"
सेप्टेम्बर 1, 2009 बेलुका 12:12 बजे
डग, म तपाईसँग सहमत छु। फेसबुक सुरुमा मेरो लागि धेरै रमाइलो थियो, र मलाई पुराना साथीहरूसँग पुन: जडान गर्ने अवसर मनपर्थ्यो। जे होस्, "खेलौना" को नयाँपन यस बिन्दुमा लुकेको छ र मलाई यो प्रणाली प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। तपाईं जस्तै, मैले मेरो समय जहाँ राखेको छु त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। के यो अन्तहीन "माफिया युद्धहरू" निमन्त्रणाहरू र मूर्ख खेल अनुरोधहरू मार्फत घुम्नको लागि समयको लायक छ? अक्सर यो छैन। म अझै पनि सेवा प्रयोग गर्छु (केही हदसम्म विनम्रतापूर्वक) तर म तपाईका भावनाहरू साझा गर्दछु कि उनीहरूलाई धेरै प्रयोगकर्ता-उन्मुख दृष्टिकोण चाहिन्छ। मलाई लाग्छ FB सँग धेरै खेल र ग्याजेटहरू छन्, र पर्याप्त वास्तविक मानिसहरू जडान गर्दैनन्।
सेप्टेम्बर 1, 2009 बेलुका 3:31 बजे
प्रगतिशील विचार डग। म फेसबुकको फ्यान भएता पनि म सूचीमा एउटा थप्न चाहन्छु। कसरी:
#6 कुनै पनि दिगो व्यापार मोडेलको अभावले मलाई FB एक दिन धुवाँको धुँवामा हराउनेछ जस्तो महसुस गराउँछ।
सेप्टेम्बर 1, 2009 बेलुका 12:45 बजे
म FB को मजा लिन्छु र धेरै पुराना साथीहरु संग जोडिएको छु जुन मैले ट्र्याक गुमाएको छु। त्यहाँ सायद राम्रो कारणहरू छन् किन मैले पहिलो स्थानमा तिनीहरूको ट्र्याक गुमाएँ। म विशेष गरी #5 सँग सहमत छु; मैले लग इन गर्दा यो पहिलो कुरा हो: सामानलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। म माफियामा खेल्न चाहन्न वा अपहरण गर्न चाहन्न र भर्चुअल फार्महरू र चिडियाखानाहरूसँग के छ? म किन साथीहरूलाई उनीहरूको अन्तिम नामद्वारा क्रमबद्ध गर्न सक्दिन?
सेप्टेम्बर 1, 2009 बेलुका 6:54 बजे
तपाईं पूर्ण रूपमा सही हुनुहुन्छ, डगलस। यी FB र Friendfeed बीचको भिन्नताहरू हुन्। र FB ले भर्खरै FF प्राप्त गरेको भए पनि, मलाई लाग्दैन कि यो भविष्यमा राम्रो हुन्छ।
सेप्टेम्बर 1, 2009 बेलुका 8:34 बजे
म #3 बाहेक सबै बिन्दुहरूमा सहमत छु — मानिसहरूले आफ्नो प्रोफाइल पृष्ठहरू MySpace-ify गर्न नसक्ने कुरालाई म आशिष् मान्छु। अन्यथा हामी माइस्पेसबाट मानिसहरूलाई पहिलो स्थानमा टाढा लैजाने सबै चकचकीत पृष्ठभूमिहरू र कष्टप्रद संगीतको अधीनमा हुनेछौं।
सेप्टेम्बर 3, 2009 बेलुका 3:20 बजे
हो .. हामीसँग यहाँ एउटै "घृणा बिन्दु" छ जस्तो देखिन्छ। म facebook भन्दा twitter प्रयोग गर्न रुचाउँछु, धेरै सरल, सजिलो र छिटो
सेप्टेम्बर 25, 2009 बेलुका 1:28 बजे
जवाफ एक पागल एन्ड्रोइड हुन छ। म कसैलाई मेरो प्रोफाइल हेर्न अनुमति दिँदिन, केवल मानिसहरू जो पहिले नै साथी छन्! निस्सन्देह यो मात्र काम गर्दछ जब सम्म तपाईं समान काम गर्ने कसैसँग लिङ्क गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं मध्ये एकले यो प्रतिबन्धलाई अस्थायी रूपमा अनडू गर्नु पर्छ, अर्कोले तिनीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्छ।